दाँत बलियो र चम्किलो कसरी बनाउने ? - VOICE OF NEPAL
दाँत बलियो र चम्किलो कसरी बनाउने ?
२० माघ २०७६, सोमबार ०२:०४
दाँतको मूख्य काम खानेकुरा चपाउनु हो । यसर्थ दाँतको सम्बन्ध सम्पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्यसँग पनि छ । किनभने जब दाँतले राम्ररी चपाएर खाइन्छ, तब पाचन प्रक्रिया सहज रुपले हुन्छ ।
कवि, कलाकारले सौन्दर्यको वर्णन गर्दा दाँतको प्रसंग पनि उल्लेख गर्ने गर्छन् । कुनै युवती वा युवक राम्रो छ भनेर पुष्टि गर्नका लागि उनीहरुको दाँतको पनि व्याख्या गरिन्छ । ‘मिलेका दाँतका पंक्ति’, ‘अनारदाना जस्तै मिलेका दाँत’ यस्तै-यस्तै ।
खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्नु सबैभन्दा उपयोगी तरिका हो । खाना खाएपछि दाँतमा अल्झिएको खानेकुराको टुक्रा, लेउ आदि हटाउनका लागि ब्रस गर्नुपर्छ । ब्रस गर्ने पनि विधी छ । समयसीमा छ । पेस्टको गुणस्तर, ब्रसको गुणस्तरले पनि यसमा भूमिका खेल्छ ।
दाँतको सफाईसँगै गिजाको मसाज गर्ने विधी पनि निकै प्रभावकारी हुन्छ । अतः दाँतलाई केहि घरेलु विधीबाट पनि सफा गर्न सकिन्छ ।